बैंकहरूको चरम लापरवाही, एटीएमबाट ननिस्किएको पैसा समेत खाताबाट गायब !
काठमाडौं, २६ वैशाख–
“हतारोमा एटीएम कार्ड चलाएको थिएँ । ‘टेक योर कार्ड एण्ड कलेक्ट योर क्यास’ भन्ने आदेश दियो मेसिनले, खर्‍याङ–खर्‍याङ गरेर ठूलो आवाजमा मेसिन करायो । लौ है अबचाहिँ पैसो निस्क्यो भनेर पैसो निस्किने प्वाल तिर हेरेँ, पैसो दिँदैन त । मोबाइलमा बैंकले एसएमएस पठाइसक्यो ‘तैंले फलानो ठाउँबाट यति पैसा झिकिस्’ भनेर । फेरि पुरक मेसेज आयो ‘तेरो पैसा फिर्ता भो भनेर । पैसा अति जरुरी थियो । फेरि कार्ड घुसाएँ र पूरा गर्नुपर्ने विधि सबै पुर्‍याएँ । फेरि उही आदेश अनि आवाज । पैसा निक्लिने प्वाल खुल्दै खुलेन । फेरि एसएमएसले उही कुरो दोहोर्‍यायो । यो सोमबारको कुरो हो ।
मंगलबार बिहान ब्यालेन्स चेक गरेँ, अकाउन्टबाट गायब । बैंकमा गएर बुझ्दा ४५ दिनमा मात्र पैसा फिर्ता हुन्छ, भन्ने जवाफ आयो । अनिकालको पैसा ४५ दिन बैंकले निर्ब्याजी चलाउने भयो । आफ्नो गोजी रित्तो छ । गल्ती तिनको, सास्ती मैले भोग्नु पर्ने यो के चाला हो ? बुझ्नै सकिनँ, यस्तै रहेछ बैंकको चलन ।”
माथिको समस्याको विषयमा हिमालयन बैंकसँग बुझ्दा कहिलेकाँही यस्तो समस्या आउने, तर प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने जवाफ आयो । एटीएम शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार बैंकको भिसा कार्ड अर्को बैंकको एटीएमममा प्रयोग गर्दा कहिलोकाँही पैसा दिँदैन, तर तत्काल खाताबाट पैसा घट्छ । कुनैबेला तत्काल पैसा फिर्ता हुन्छ, फिर्ता नभए सम्बन्धित बैंकलाई भन्नुपर्दा ढिलाइ हुन्छ ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो प्राविधिक समस्या हो, कहिलेकाँही सबै बैंकहरूले यो समस्या बेहोर्नुपरेको हुन्छ, ग्राहकलाई मात्रै होइन यसले बैंकहरुलाई पनि झन्झटमा पारिरहेको हुन्छ ।’
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो समस्या प्राविधिक हो, नीतिगत समस्या होइन, सम्बन्धित बैंकसँग बुझ्नुस् ।’
वडा सदस्य उत्तम चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर काठमाडौँ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजापुर नगरपालिका १० का वडा सदस्य उत्तम चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । क्रसर उद्योगको दर्ता गर्न सिफारिस गरिदिने भनी...
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमप्रति लोकसेवा आयोगको असन्तुष्टि